Wayzọ kachasị mma iji zụta Bitcoin jiri kaadị Debit na Machị 2021 - Mụta ahia 2
Etu ị ga-esi jiri kaadi Debit zụta Bitcoin - Mụta Nduzi Azụmaahịa 2 2021
N'ime afọ ndị mbụ nke ịdị adị Bitcoin, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume itinye ego na dijitalụ na ego ụwa. Agbanyeghị na enwere ntanetị dị n'ịntanetị nke nyere gị ohere itinye ego na akaụntụ akụ, usoro itinye ego na njedebe ga-ewe ọtụtụ izu.
Ọganihu ngwa ngwa na 2021 ma ọ dị mfe ịzụta Bitcoin na kaadị debit. N'ezie, enwere ọtụtụ ikpo okwu na-ejere ndị ahịa UK ozi, ụfọdụ n'ime ha na-achịkwa FCA.
N'ime akwụkwọ ntuziaka a, anyị na-akọwa ins na outs nke otu ị ga-esi jiri kaadị debit kwa ụbọchị zụta Bitcoin. N'ụzọ dị oke mkpa, anyị na-enyocha ihe ịchọrọ iji lelee anya tupu iji onye na-ere ahịa ọhụrụ, mgbanwe, ma ọ bụ usoro azụmaahịa - dịka iwu, ụgwọ, na mwepu ego.
Rịba ama: Ka anyị na-akọwapụta na ntuziaka a, ịkwesịrị iche echiche banyere ihe mgbaru ọsọ itinye ego gị tupu ịzụta Bitcoin. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-ere ahịa kacha mma maka itinye ego na ogologo oge, ndị ọzọ na-enyere ndị ahịa ahịa kwa ụbọchị aka.
Zụrụ Bitcoin Na kaadị Debit na Nkeji 5
Oge adighi igu akwukwo ndu anyi n'uju. Ọ bụrụ otu a, soro usoro ọkụ ọkụ akọwapụtara n'okpuru iji zụta Bitcoin na kaadị debit ugbu a.
➖ Kwụpụ 1: Mepee akaụntụ anyị nke kachasị Bitcoin ore ahia - Crypto rọketi
➖ Kwụpụ 2: Nyochaa njirimara gị site na iji otu nnabata gị
➖ Kwụpụ 3: Tinye debit kaadị nkọwa na ego ego
➖ Kwụpụ 4: Gaa na Bitcoin trading peeji ma debe iwu ịzụta
➖ Kwụpụ 5: Chekwaa gị Bitcoin na onye na-ere ahịa ruo mgbe ị dị njikere ire
Bitcoinzụta Bitcoin Na Kaadị Debit - Isi
Ọ bụrụ n ’ịbụ onye ọhụụ nye ụwa dị ịtụnanya na nke magburu onwe ya nke cryptocurrencies, mgbe ahụ ọ kacha mma na ị nwere nghọta siri ike banyere etu usoro itinye ego n’ọrụ siri arụ tupu iwepụ ego gị Nke mbu, iji zuta Bitcoin na kaadi debit, ikwesiri iji uzo ozo nke ato. Nke a nwere ike ịbụ mgbanwe ọkachamara cryptocurrency ma ọ bụ onye na-ere ahịa CFD.
Ikpo okwu ị họọrọ ga-adabere n'ụdị ntinye ego ịchọrọ itinye. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-achọ ịzụta Bitcoin ka ị nwee ike zụọ ya na mkpuchi ndị ọzọ dị ka Ethereum ma ọ bụ Ripple, mgbe ahụ ị ga-akacha mma iji mgbanwe mgbanwe cryptocurrency.
Nke a bụ n'ihi na ị ga-enwe ike iji azụmaahịa Bitcoin jiri ọtụtụ narị mkpụrụ ego ndị ọzọ site na otu ikpo okwu. Agbanyeghị, imirikiti nyiwe ndị a na-arụ ọrụ n'ụzọ a na-achịkwaghị achịkwa, yabụ jiri nwayọ na-azọ ụkwụ. Na nsọtụ ọzọ nke ụdịdị dị iche iche, ọ bụrụ na ị na-achọ ịzụta Bitcoin na usoro siri ike, nke a na-achịkwazi, anyị ga-atụ aro iji onye na-ere ahịa n'ịntanetị
N'ime ime nke a, ọ bụghị naanị na ị nwere udo nke uche nke cryptocurrency ore a na-achịkwa, mana ụgwọ na-adịkarị ala. Ọzọkwa, ị ga-enwe nhọrọ nke mkpụmkpụ Bitcoin (na-ekwu na ọ ga-aga ala na uru) na itinye ntinye ego (itinye ego karịa nke ị nwere na akaụntụ gị).
Uru na ọghọm nke iji Kaadị Debit Zụta Bitcoin
Mee nkwụnye ego gị na akaụntụ gị ozugbo
Họrọ site na Visa, Visa Electron, MasterCard, ma ọ bụ Maestro
Platformsfọdụ nyiwe anaghị akwụ ụgwọ ụgwọ nkwụnye ego kaadị debit ọ bụla
Ndị nabatara kaadị debit ga-enwerịrị ikike
Dọrọ ego na kaadị akwụmụgwọ gị mgbe ị na-akwụpụta ego
Ndị na-ere ahịa dị elu ejiri SSL zoo iji mee ka nkọwa kaadị gị ka ọ dị mma
Ọtụtụ ndị na-achịkwa akara ịhọrọ site na
Oke dị ala karịa ma e jiri ya tụnyere inyefe ụlọ akụ
Ga-ebu ụzọ nyochaa njirimara gị
AMEX anaghị akwado nkwado
Esgwọ Zụrụ Bitcoin Na kaadị Debit
Tupu anyị abanye n’ebumnuche nke otu esi ahọta onye na-ere ahịa na ntanetị, ka anyị chọpụta ụfọdụ n’ime ụgwọ ndị ị ga-ebu n’uche mgbe ị na-eji kaadị debit gị. Rịba ama, ụgwọ a kapịrị ọnụ ga-adị iche site na onye na-ere ahịa na onye na-ere ahịa, yabụ kpachara anya ịlele nke a tupu ịmepe akaụntụ.
Ego mbụ ikwesiri ileba anya bụ ụgwọ nwere ike iji kaadị debit. N'adịghị ka kaadị akwụmụgwọ, onye na-ewepụta kaadị debit gị agaghị akwụ gị ụgwọ maka iji kaadị ahụ zụta Bitcoin, ebe a na-ahazi ya n'otu ụzọ ahụ azụmahịa ọzọ. Na nke ahụ kwuru, ụfọdụ ndị na-ere ahịa ndị ọzọ ga-akwụ gị ụgwọ ego azụmahịa maka iji kaadị debit gị.
Ọ bụrụ na ha emee, a na-ebo ebubo a dị ka pasent ego ole ịchọrọ ịkwụnye.
Ihe omuma atu bu isi nke a bu Coinbase na-ewu ewu nke cryptocurrency - nke nwere ugbu a ulo oru UK.
Ihe ikpo okwu na-ebu 3.99% dị egwu mgbe ị na-eji kaadị debit.
Yabụ, ọ bụrụ na ịzụrụ worth 1,000 uru nke Bitcoin, ị ga-akwụsị ịkwụ ụgwọ .39.99 XNUMX na ego nkwụnye ego.
Ma nke ahụ bụ tupu ị ga-abanye na ọrụ azụmaahịa nke ikpo okwu yana mgbasa!
Nke a bụ ihe kpatara anyị ji atụ aro ịrapara na onye na-ere ahịa na-enye gị ohere itinye ego na kaadị debit n'efu. N'ezie, ndị na-ere ahịa niile akwadoro na ibe a na-eme nke ahụ.
Commission Trading Commission
Ego ọzọ ikwesiri ị tụlere bụ nke ụlọ ọrụ azụmaahịa. Na nkenke, nke a bụ ọrụ nke onye na-ere ahịa na-ebu ebubo mgbe ị na-azụ ahịa.
A na-egosiputa nke a dị ka pasent, naanị oge a megide ego ịchọrọ ịzụ. Ọzọkwa, ị ga-akwụ ụgwọ ego a na isi abụọ nke azụmaahịa ahụ - ọ pụtara na a ga-ebo gị ebubo mgbe ị debere usoro ịzụta na ere ere.
Coinbase na-akwụ ụgwọ ego azụmaahịa nke 1.5%
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịzụta worth 1,000 uru nke Bitcoin, ị ga-akwụ ụgwọ ọrụ nke £ 15
Nke a ga - ahapụ gị naanị £ 985 nke Bitcoin
Ọnwa ole na ole ka e mesịrị, Bitcoin gị ugbu a ruru £ 1,500, yabụ ị kpebiri itinye ego na uru gị
Na kọmitii nke 1.5%, £ 1,500 na-ere ahịa na-ebute ụgwọ nke £ 22.50
Ọzọkwa, ọtụtụ n'ime ndị na-ere Bitcoin na anyị edepụtara na ibe a na-enye gị ohere ịzụ ahịa cryptocurrencies n'ebughị ụgwọ ọrụ ọ bụla. Kama nke ahụ, naanị ego ị ga-eburu n'uche bụ mgbasa - nke anyị na-akọwa na ngalaba na-esote.
Ma ị na etinye ego na ebuka na mbak, ngwa ahịa, ETFs, ma ọ bụ ego - ị ga-akwụ ụgwọ anaghị akwụ ụgwọ dịka ama gbasara. Bitcoinzụ Bitcoin abụghị iche. Maka ndị na-amaghị, mgbasa bụ ihe dị iche na ọnụahịa 'zụrụ' na 'ree' ego nke ihe onwunwe.
Ọdịiche a na ọnụahịa bụ otu ndị na-azụ ahịa si ahụ na ha na - enweta ego mgbe niile - n'agbanyeghị etu ụzọ ahịa si aga.
N'ihe banyere ịzụta Bitcoin, na Mgbasa dị mkpa dịka ọ na - etinye gị na ọghọm Na usoro Layman, ịkwesịrị ịme uru nke ha na mgbasa ahụ gbasaa naanị imebi. Dika odi otua, ka odi elu gbasara mgbasa, ọ ga - esiri gị ike ịkpata ego.
Ọnụ ahịa ahịa nke Bitcoin bụ ,7,000 XNUMX
Na ore ahia awade a 'Buy' price of, 6,860
Ọnụ 'ere' ruru £ 7,140
Ihe dị iche n'etiti ọnụahịa abụọ ahụ na ọnụahịa ahịa bụ £ 140
Nke a ruru 2%, nke pụtara na mgbasa bụ 2%
Yabụ, ọ bụrụ na ịzụrụ worth 2,000 uru nke Bitcoin site na onye na-ere ahịa na ebubo mgbasa nke 2%, ị ga-enweta uru nke opekata mpe 2% naanị iji mebie. Yabụ, ọ bụrụ na ị zụrụ Bitcoin wee kpebie ozugbo ire ya, ị ga-atụfu 2%.
Hapụ ego Bitcoin gị
Ọ bụrụ n’ịchọrọ iji kaadị debit zụta Bitcoin, mgbe ahụ enwere ezigbo ohere na ị na-eme ya n’ihi na ị chere na ọ ga-aba uru n’ọdịniihu. N'ezie, nke a bụ isi ihe mere ndị mmadụ ji etinye ego na Bitcoin, ebe nkwenye zuru oke bụ na ego dijitalụ ka bara uru naanị nkebi nke ike-ya nwere ogologo oge.
Site na nke a, ịkwesịrị iche echiche banyere otu ị bu n'obi isi dobe Bitcoin gị. Nke a bụ usoro usoro ntinye ego nke na - ewepụ ndị na - etinye ego ọhụrụ, ọ bụghị opekata mpe n'ihi na etinyere Bitcoin - nke pụtara na achọrọ ka ị were ọrụ zuru oke maka mkpụrụ ego gị.
Nke a bụ usoro izugbe zuru oke iji zụta ma chekwaa Bitcoin:
Na-azụta Bitcoin n'aka onye na-ere ahịa n'ịntanetị
Download na-ebudata obere akpa Bitcoin dijitalụ
Mgbe ahụ ị ga - ewepu Bitcoin site na onye na - ere ahịa site na itinye adreesị akpa gị pụrụ iche (na-abụkarị mkpụrụedemede 36 mkpụrụ-mkpụrụ)
Nkeji 10 ka nke ahụ gasịrị, Bitcoin abịarute na obere akpa gị dijitalụ
Bitcoin na-anọgide na obere akpa gị ruo mgbe ị kpebiri na ị ga-ere ya
Kwesịrị ịnyefe mkpụrụ ego ahụ na onye na-ere ahịa ma gbanwee ya maka ego
Dịka ị pụrụ ịhụ site na ihe atụ dị n'elu, usoro ịzụta, iwepụ, ịchekwa, na mgbe ahụ ịre Bitcoin gị abụghị naanị ihe na-agwụ ike kama ọ na-ewe oge dị ukwuu. Ọzọkwa, na ikekwe nke kachasị mkpa - ọ bụrụ na agbanwere obere akpa dijitalụ gị - ma ọ bụ na ị na-emehie site na itinye adreesị obere akpa gị - Bitcoin gị ga-apụ ruo mgbe ebighị ebi.
Nke a bụ ihe kpatara ejiri zụọ gị ka ịzụrụ Bitcoin nwere onye na-ere ahịa na ntanetị. N'ime ime nke a, ọ nweghị ihe achọrọ iji wepụ mkpụrụ ego gị, yana ịkwesighi iche maka nchekwa. Kama nke ahụ, itinye ego gị na-anọ n'usoro iwu enyere ogologo oge ịchọrọ ịdebe ya.
Na-etinye ego ntinye ego nke Bitcoin na kaadi Debit
Dị ka e kwuru n'elu, ọ bụghị naanị na usoro ịdọrọ na ịchekwa Bitcoin gị na obere akpa nke nwere ihe egwu, mana ọ bụ nnukwu nsogbu mgbe ị na-emefu ego gị. Otú ọ dị, site na iji a na-achịkwa ore na-enye institutional-ọkwa nche, na cashout usoro nwere ike ọ gaghị adị mfe.
Nke a bụ ihe atụ nke etu usoro a ga - esi rụọ ọrụ mgbe ị na - eji kaadi debit.
You na-azụta £ 1,000 uru nke Bitcoin sitere na onye na-ere ahịa CFD na-enweghị ọrụ
Bitcoin na-anọgide na akaụntụ nkwụsị gị
Ọnwa 12 ka nke ahụ gasịrị, Bitcoin ruru 60% karịa ọnụahịa ị kwụrụ maka ya, yabụ ị kpebiri iwepụta ego gị
Site na itinye iwu 'ere', Bitcoin gị ghọrọ ozugbo ego ụwa (pound, dollars, euro, wdg) na ntọala enweghị ọrụ
Na-arịọ mbugharị azụ gị debit kaadị
Ego ahụ ruru kaadi debit gị 1-3 ụbọchị ọrụ ka emechara
Dịka ị pụrụ ịhụ site na ihe atụ dị n'elu, otu uru dị ukwuu nke iji onye na-ere ahịa CFD achịkwa bụ na ị ga-enwe ike ị nweta ego Bitcoin gị na pịa bọtịnụ.
Họrọ onye na-ere ahia iji zụta Bitcoin na kaadị Debit
Yabụ ugbu a ị matara ihe ọ ga - ewe iji zụta Bitcoin na kaadị debit, ugbu a anyị ga - atụle usoro ịhọrọ onye na - ere ahịa na ntanetị. Nke a abụghị ihe dị mfe, enwere ugbu a ọtụtụ ndị na-azụ Bitcoin na-enye gị ohere itinye ego na ezigbo ụwa.
Rịba ama: Ọ bụrụ na ịnweghị oge iji nyochaa onye na-ere Bitcoin na DIY, anyị ga-adụ ọdụ ịlele nyiwe ise anyị kwadoro na ala nke ibe a.
Ka o sina dị, anyị ga-atụ aro ka ị nyochaa usoro ndị a tupu ịhapụ ego gị.
N'ihe ka ukwuu n'ime ụlọ ọrụ Bitcoin na-arụ ọrụ n'ụzọ na-enweghị usoro a na-achịkwaghị achịkwa, nke a na-eme ka usoro itinye ego na itinye ego dị egwu. N’ụzọ dị oke mkpa, ị gaghị enwe ebe ị ga-atụgharị ma ọ bụrụ na onye na-ere ahịa na-eme omume ezighi ezi.
Dị ka ndị dị otú a, ị kwesịrị iji naanị onye na-ere ahịa nke dị na nnata nke ikikere nchịkwa. N'ọtụtụ ikpe, nke a ga-abụ nke otu ikikere ikikere dị ka FCA (UK), ASIC (Australia), ma ọ bụ CySEC (Cyprus).
N'ezie, ụfọdụ ndị na-ere ahịa edepụtara na ibe a nwere ikikere multiple òtù na-achịkwa.
Ards Kaadị akwụmụgwọ akwadoro
Ọ bụ ezie na onye na-ere ahia nwere ike ịnabata kaadị debit kaadị, ị ka kwesịrị ịlele ma ama akwadoro kaadị gị.
Dịka ọmụmaatụ, anyị ahụla ndị na-ere ntanetị n'ịntanetị na-anabata Visa, mana ọ bụghị MasterCard.
Nzọụkwụ a dị mkpa karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-eji kaadị nke Maestro ma ọ bụ AMEX nyere, ebe ọ bụ na nkwado anaghị adịkarị ma e jiri ya tụnyere Visa ma ọ bụ MasterCard.
✔️ Ego, isslọ Ọrụ na Mgbasa
Ọ dị oke mkpa na ị nwere nghọta siri ike banyere ụdị ego ego nke onye na-ere ahịa na-arụ. Dika anyi kpuchitere na mbu na ntuziaka anyi, ufodu ndi na eme ahia na eburu ego ahia na ego kaadi debit.
Ọzọkwa, ị kwesịrị inyocha ma ọ bụ na onye na-ere ebubo ebubo ụgwọ ọrụ. Imirikiti ndị na-ere ahịa edepụtara na ibe a na-enye gị ohere ịzụ ahịa na enweghị ọrụ.
On top of nkwụnye ego ụgwọ na trading isslọrụ, ị kwesịrị ị na inyocha otú asọmpi ore na-agbasa ngalaba. Nke a nwere ike ime ihe dị iche mgbe ị na-etinye ego na Bitcoin - ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ itinye aka na mkpụmkpụ oge.
Naanị n'ihi na onye ahịa ị họọrọ na-ejide ikikere iwu, nke a abụghị ịsị na ọ bụ njikwa nchekwa dị na ọkọ. Nke a dị oke mkpa, dịka ịchọrọ ijide n'aka na akaụntụ itinye ego gị na-adịgide adịgide n'oge niile.
N'ihu nke a bụ onye na-ere ahịa cryptocurrency na-arụ ọrụ nchekwa nke ụlọ ọrụ. Nke a gụnyere ihe abụọ nyocha abụọ - nke chọrọ ka ị tinye koodu pụrụ iche nke ezigara na ekwentị gị oge ọ bụla ị banyere na akaụntụ gị.
Anyị na-atụ anya na ebe nrụọrụ weebụ ndị na-ere ahịa nwere SSL izo ya ezo. A ana achi achi na gị onwe onye data adịghị banye na-ezighị ezi aka.
Itinye ego ma na-ere obere
Ọ bụ ezie na ọtụtụ inwere ike iji kaadị debit zụta Bitcoin maka naanị ebumnuche gị ijide ego gị ogologo oge, ụfọdụ n'ime gị nwere ike ịlele egwuregwu dị mkpụmkpụ.
Ọ bụrụ otu ahụ, ị ​​na-achọ itinye ihe ntinye ego na azụmaahịa gị, jide n'aka na ị ga-elele ma onye na-ere ahịa na-akwado nke a. Echefula, ọ bụrụ na ị nọ na UK ma na-ewereghị gị dị ka onye na-azụ ahịa ọkachamara, a ga-etinye gị na ntinye nke 2: 1 na cryptocurrencies.
On leverage, ị nwere ike ịmasị ịre Bitcoin na-ere obere oge. Ọ bụrụ otu a, nke a pụtara na ị na-ekwu na ọnụego ya ga-agbada. Mee elu mee ala, ị ga-eji onye na-ere ahịa CFD achịkwa ma ọ bụrụ na ntinye ego na / ma ọ bụ ire ere dị mkpirikpi bụ ihe ị ga - eme.
Ọ dịkwa mkpa iji onye na-ere ahịa Bitcoin nke na-enye nkwado nkwado kachasị elu. Nke a na-abata n'ụdị nkata ndụ ma ọ bụ email, ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-azụ ahịa na-enyekwa akara nkwado ekwentị.
Ọzọkwa, jide n'aka na ịlele oge elekere na ụbọchị ndị ọrụ ndị ahịa. Industrylọ ọrụ mmepụta ihe bụ 24/5, nke pụtara na enweghị nkwado n'oge ngwụcha izu.
Etu esi azụta Bitcoin na kaadị Debit
Ọ bụrụ n ’ịzụtabeghị Bitcoin tupu mgbe ahụ ma ịchọrọ ụfọdụ ntụzịaka, soro usoro ije ije nke a depụtara n’okpuru.
1kwụ na XNUMXkwụ XNUMX: Họrọ a Broka nke Na-akwado Debit Kaadị
Firstzọ mbata gị ga - ahọrọ onye na - ere ahịa n’ịntanetị nke na - akwado nkwụnye ego na nkwụnye ego. Dị ka akụkụ dị n'elu, ugbu a ị nwere ngwaọrụ achọrọ iji chọta onye na-ere ahịa nke na-ezute ihe onwe gị chọrọ.
Ọ bụrụ na ịnweghị oge iji nyochaa onye na-ere ahịa na onwe gị, ị ga-ahụ ndị ahịa ise Bitcoin nyere akara aka edepụtara na ala nke ibe a. Onye ahia ọ bụla nwere ezigbo aha na ahia n'ịntanetị oghere, yabụ na ego gị dị mma n’oge niile.
Kwụpụ 2: Mepee Akaụntụ ma bulite NJ ụfọdụ
Dịka ị ga-eji onye na-ere ahịa na-achịkwa, a ga-achọ ka ịmepe akaụntụ. Usoro a adịkarịghị ewe ihe karịrị nkeji ole na ole ma chọọ naanị ozi nkeonwe.
Ga-ahụ chọrọ iji nyochaa njirimara gị. Imirikiti ndị na-ere ahịa edepụtara na ibe a na-enye gị ohere ịme nke a n'ụzọ akpaghị aka. Naanị bulite oyiri doro anya nke NJ gị nyere gị (paspọtụ ma ọ bụ ikike ịnya ụgbọ ala) yana sistemụ ahụ kwesịrị ịkwado ya ozugbo.
🥇 Kwụpụ 3: Jiri Kaadị Debit Gị Nye Ego
Ozugbo enyochachara ID, ị ga - enwe ike itinye kaadi kaadị gị. Gaba na-echekwa ego na peeji nke gị họọrọ ore ahia na họrọ debit kaadị nhọrọ.
Wee, tinye nọmba 16 dị n’ihu kaadị gị, n’akụkụ ụbọchị mmebi ya na CVV. Tinye ego ịchọrọ itinye na ego mpaghara gị ma kwado azụmahịa ahụ.
Nzọụkwụ 4: Zụrụ Bitcoin
Ugbu a na akaụntụ azụmaahịa gị kwadoro, ị nwere ike ịga n'ihu ịzụta Bitcoin. Gaba na ngalaba cryptocurrency nke saịtị ma lelee Bitcoin. Rịba ama, ọtụtụ ndị na-ere ahịa ga-akwụ Bitcoin ọnụ na dollar US, ebe nke a bụ ọkwa ụlọ ọrụ.
Tinye ego nke Bitcoin ịchọrọ ịzụta, wee gosi usoro gị. Ọ bụrụ na ị na-achọ itinye ọkaibe azụmaahịa - dịka itinye ntinye ma ọ bụ ire ere dị mkpirikpi, tinye ihe ị chọrọ tupu ị kwado usoro gị.
Top 5 Broka iji Bitcoin Debit Zụta Bitcoin
Ọ bụrụ n’ịchọ iji kaadị debit zụrụ Bitcoin, mana ị maghị nke onye na-ere ahịa iji mee nke a, lelee ndụmọdụ ise kacha elu anyị n’okpuru.
eToro is ideal if you are buying Bitcoin for the very first time. You can open an account in minutes, and the broker supports both debit and credit cards. There are no fees to deposit funds with a debit card. Only real cryptos are available for US users.
Ka o siri dị, ọ bụ naanị ọsọ ị chọrọ ile anya. N'ụzọ dị oke mkpa, FCT, ASIC, na CySEC na-achịkwa eToro - yabụ ozu gị ga-anọrịrị na nchekwa n'oge niile. Nwere ike wepụta ego gị Bitcoin uru azụ gị debit kaadị, albeit, a obere ego nke $ 5 ga-etinye.
Anyị nwere olile anya na site n'ịgụ ntuziaka anyị site na mmalite ruo n'ọgwụgwụ, ugbu a ị nwere nghọta dị mma banyere ihe ọ ga-ewe iji zụta Bitcoin na kaadị debit. Dị ka ị maara ugbu a, usoro ahụ agaghị adị mfe. Naanị mepee akaụntụ, bulite ụfọdụ ID, tinye nkọwa nke kaadị debit na ọ bụ ya - ị zụtala Bitcoin na-erughị nkeji 10.
Otú ọ dị, akụkụ kachasị sie ike nke usoro a bụ ịchọta onye na-ere ahịa nke kacha mma na-egbo mkpa gị. Dịka anyị tụlerela nke ọma, ịkwesịrị ịchọ maka usoro gburugburu iwu, ọrụ, ụgwọ nkwụnye ego, nkwado ndị ahịa, na ndị ọzọ.
Iji nyere gị aka n'okporo ụzọ ahụ, anyị edepụtala ndị ahịa ise kachasị elu anyị na-enye gị ohere ịzụta Bitcoin na kaadị debit. Nke a na - echekwa gị nsogbu nke ịme nyocha nke onwe gị, ebe ọ bụ na a nyochaalarịrị nyiwe anyị niile akwadoro.
Ọ nwere ike ịzụta Bitcoin na kaadị akwụmụgwọ akwụburu ụgwọ?
Ee, ọ bụrụhaala na onye na-ere ahịa na-akwado onye na-ewepụta kaadị (Visa, MasterCard, wdg), mgbe ahụ ị kwesịrị inwe nsogbu ọ bụla site na iji kaadị debit akwụ ụgwọ iji zụta Bitcoin. Na nke ahụ kwuru, ịkwesịrị ịlele ma enwere ike ịweghachi azụ na kaadị ahụ.
Kedu ihe nkwụnye ego pere mpe mgbe ị na-eji kaadị debit ịzụta Bitcoin?
Nke a ga-adịgasị iche dabere na onye na-ere ahịa ị na-eji. Nke a na-anọdụkarị n'ime £ 50- £ 100, n'agbanyeghị, gbalịa lelee nke a tupu ịmepe akaụntụ
Kedu ihe kpatara m kwesiri iji bulite ID iji zụta Bitcoin na kaadị debit?
Iji nọgide na-ekwenye na onye na-ewepụta ikike ha, ndị na-ere ahịa Bitcoin na-achịkwa ga-enyocha onye ọrụ ọ bụla nke na-edebanye aha na saịtị ya.
Gịnị nkwụnye ego ụgwọ ka m kwesịrị ịkwụ ụgwọ mgbe eji debit kaadị iji zụta Bitcoin?
Ọ bụrụ na ebubo ego nkwụnye ego, a na-ebokarị ya ebubo dị ka pasent megide uru nke nzụta gị. Site na nke ahụ, nnukwu ndị na-ere ahịa na-enye gị ohere itinye ego na kaadị debit n'efu.
Mylọ akụ m ọ ga-enye m ohere iji kaadị debit m zụta Bitcoin?
Ikwesighi inye ikike iji kaadi debit gị zụta Bitcoin - ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-eji onye na-ere ahịa na-achịkwa.
Enwere m ike ịlaghachi azụ na kaadị m ji akwụ ụgwọ?
Ee, ọ bụ ezie na ị jiri kaadị debit tinye ego na onye ị họọrọ, ị ga-eweghachi uru gị na otu kaadị ahụ. Nke a bụ igbochi egwu nke itinye ego na ego.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ iji kaadị debit gị mee ka Bitcoin dị mkpụmkpụ, ị ga-eji onye na-ere ahịa CFD achịkwa. E nwere ọtụtụ narị na-arụsi ọrụ ike na oghere UK, yabụ jiri amamihe họrọ.